भेरीको दुषित पानी पिउन बाध्य खाराका सर्वसाधारण (फोटो फिचर) | ईमाउण्टेन समाचार
भेरीको दुषित पानी पिउन बाध्य खाराका सर्वसाधारण (फोटो फिचर)
असोज १९, २०७८ पढ्न १ मिनेट
भेरी । हुनेखानेले बोतलका शुद्ध पानी छानीछानी पिउँदा जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका–१३ का सर्वसाधारणहरू भेरी नदीको फोहोर पानी पिउन बाध्य छन् । पुर्खौंदेखि भेरी नदीको फोहोर पानी आधा घण्टाको दूरीमा बोकेर पिउनु पर्ने बाध्यता भए पनि खाराबासीको पीडामा मलम लगाउने अस्त्र अहिलेसम्म फेला परेको छैन । (फोटो फिचर)
अन्य‐मा वर्गिकृतbheri, photofeature
उर्लंदोे भेरीको धमिलो पानीले तिर्खा मेट्दै खारावासी
जलस्रोतको धनी देशमा १ करोड ४७ लाखको पानी आयात !
हिलो मिसिएको धमिलो पानी पिउँदै उपत्यकावासी !
तिर्खा मेटाउन कर्णालीको पानी
डोटीमा खानेपानीको अभाव, स्थानीय दुषित पानी पिउन बाध्य
बैतडीका स्थानीय नहरको फोहोर पानी प्रयोग गर्न बाध्य